Banyere Anyị - Shenzhen Margotan Technology Co., Ltd.
Ebe ọ bụ na e guzobere ya na 2013, Shenzhen Margotan anọwo ọkachamara ọkachamara na imewe, mmepe na mmepụta nke ngwa eji mma ụlọ. Anyị nọ na Shenzhen, nwere ohere njem dị mma.
Na-ekpuchi ebe nke 3,000 square mita, anyị nwere ugbu a n'elu 180 ọrụ, 2 klas-10,000 uzuzu-free ogbako na 5 agbakọta ahịrị na 10,000pcs 'kwa ụbọchị mmepụta ike. Ụlọ ọrụ anyị agafeela nyocha nke ISO9001, BSCI. Ngwaahịa anyị niile nwere CE, ROHS, FCC, REACH asambodo na ndebanye aha FDA.
Anyị ga-anọgide na-etinye akwụkwọ maka asambodo kwa ahịa na arịrịọ ndị ahịa. Ụlọ ọrụ nyocha anyị nke ọma na mmepụta ihe, yana ụkpụrụ njikwa mma siri ike n'oge usoro mmepụta ihe niile na-enyere anyị aka ịkwado ịdịmma kwụsiri ike na afọ ojuju ndị ahịa.
Anyị na-elekwasịkarị anya na ahịhịa na-ehicha ihu, onye na-ahụ maka anya, ihe mkpuchi ihu na onye na-ahụ maka ihu galvanic. Ndị injinia R&D anyị niile nwere ahụmịhe bara ụba na ngwaọrụ ịma mma. N'ime afọ abụọ gara aga, anyị amalitelarị ụdị ọhụrụ 13 nwere ikike nke anyị ma na-eme atụmatụ ịhapụ ụdị ọhụrụ 5 n'afọ a. Enwere ike ịnye ọrụ nkwụsịtụ site na ID, Structural ruo mmepụta. Ugbu a, ebupụla ngwaahịa na mba 30 gburugburu ụwa, dị ka USA, Canada, UK, Germany, Italy, Russia, Japan, Singapore wdg. Ndị mmekọ anyị na-asọpụrụ: L'Oreal, Mary Kay, Avon, Estee Lauder wdg.
Kwa afọ anyị na-ekere òkè n'ụwa nile ọkachamara ịma mma ngosi, dị ka Cosmoprof Bologna, Las Vegas, Asia HK, Mma ngosi Japan, Cosmetech Japan, Expo Mma Fair Mexico wdg Dabere na anyị top àgwà ngwaahịa, agbanwe agbanwe ọhụrụ na imekọ ihe ọnụ na pụtara ìhè ndị mmadụ na ụdị, anyị na-agbalịsi ike ịbụ onye ndu mgbe niile na ịma mma onwe onye & ụlọ ọrụ nlekọta anụ ahụ.
Ozi: Nyere onye ọrụ ọ bụla aka ka ọ na-egosipụta ọdịdị kacha mma mgbe niile.
Ọhụụ: Bụrụ onye na-arụ ọrụ ika kachasị ewu ewu nke Ngwaọrụ Nlekọta Mma & Ahụhụ.
Uru: Iguzosi ike n'ezi ihe na azụmahịa na nnukwu ọrụ / ọganihu na-aga n'ihu na mmepụta ihe ọhụrụ / arụmọrụ dị elu / imekọ ihe ọnụ Win-Win.